C/raxmaan Saylici Oo Soo Kormeeray Mashaariicda JPLG-ga Ee Gabiley Ka Socda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on October 27, 2016 by sdwo · No Comments
Gabiley (SDWO.com): Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariicda dhinaca horumarka ee ay degmadaasi ka hirgelisay dawladda hoose ee Gabiley.
Waxaanu madaxweyne ku xigeenku si gaar ah u soo kormeeray halka ay marayaan iyo waxyaabaha ka hirgalay mashruuca JPLG (Join Program local governments) ee magaaladda Gabiley, kaasi oo muddo afar sanadood ah ka socday Gabiley.
Madaxweyne ku xigeenka oo ay wehelinayeen xubno masuuliyiin ah ayaa shalay gelinkii danbe ka soo kicitimay magaaladda Boorma, halkaasi oo ay kaga qayb galeen aas qaran oo Boorama loogu sameeyay ALLE ha u naxariistee marxuum Maxamed Xasan Sheekh Nuuriye, oo doraad ku geeriyooday isla Booram.
Waxaanu C/raxmaan Saylici soo indho-indheeyay barnaamijyadda horumarineed ee ay wado dawladda hoose iyo sidoo kale meelaha ay ka socdaan dhismeyaal isugu jira wadooyin, sariibadda iyo kuwo kale oo ka mid ah mashaariicda laga maalgelinayo mashruuca horumarinta degmooyinka ee loo yaqaano JPLG-ga.
Kadib markii uu madaxweyne ku xigeenku soo dhamaystay kormeerkaasi ayaa waxaa uu kulan kula yeeshay xarunta dawladda hoose ee Gabiley maamulka gobolka, ka degmadda iyo masuuliyiin kale.
Waxaana kulankaasi laga jeediyay hadalo ku saabsanaa halka uu marayo mashruuca JPLG-ga iyo mashaariicda kale ee dhinaca horumarka ee ay waddo dawladda hoose ee Gabiley, iyadoo ay kulankaasi masuuliyiinta Gabiley ka sheegeen baahiyaha ay degmadu qabto.
Maayarka degmadda Gabiley Maxamed Aamiin Cumar Cabdi, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in mashruuca JPLG uu Gabiley ka socday muddo afar sanadood ah, iyadoo qiimayn sanadkii hore lagu sameeyay mashruucaasi in Gabiley ay kaalinta koowaad ka noqotay xataa degmooyin uu toban sano ka socday.
Waxaanu yidhi “Farxad ayay noo tahay madaxweyne ku xigeen in aad noo timaado, oo aad nala eegto mashruuca JPLG sida uu Gabiley uga socdo. Mashruucani JPLG-ga Gabiley waxa uu ka socday muddo afar sanadood ah.
Waxaanu aad u jecelnahay, oo aanu ku faanaynaa, isla markaana aad ugu faraxsanahay in aad madaxweyne ku xigeen adiguna nooga markhaati kacdo in Gabiley qiimayntii sanadkii hore lagu sameeyay JPLG-ga, ayaa degmooyinkii uu tobanka sanadood ka socday mashruucaasi iyo anagoo afar sanadood oo keliya ku soo jirnay in Gabiley ay kaalinta koowaad ka noqotay. Taasina waxay ka markhaati kacaysaa sida uu Gabiley uga shaqeeyay mashruucani JPLG-ga”.
Geesta kale C/raxmaan Saylici, oo isna maayarka kadib halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in uu ku soo arkay dhamaanba goobihii uu kormeerka ku soo maray in mashruucaasi uu si wanaagsan uga socdo.
Waxaanu qiray in Gabiley ay si fiican uga faa’iidaysatay barnaamijka JPLG-ga, isla markaana ay muuqato in mashruucaasi uu noqday mid midho-dhal ah. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay-na waxa uu yidhi “Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii, mashaariicda laga maalgelinayo JPLG-ga sida ay u socdaan meelaha aanu soo marnay. Waxaana muuqata in ay midho-dhal noqotay hawshaasi”.
“Gabiley waxay ka mid ahayd degmooyinkii ugu danbeeyay ee laga hirgeliyo mashruuca JPLG-ga, iyadoo uu ka socday muddo afar sanadood ah, waxaana muuqata run ahaantii in ay Gabiley si aad ah uga faa’iidaysatay afartaasi sanadood.
Waanan ku hambalyay-nayaa maayarka iyo xildhibinaada golaha degaanka iyo hay’adaha kale ee kala shaqeeyaba”.